Central Queensland University - Tadisha Kwamanye Amazwe e-Australia
Central Queensland University Yokuxhumana
isifinyezo : TER
Ungakhohlwa xoxa Central Queensland University
Bhalisa at Central Queensland University
Central Queensland University (kungenjalo eyaziwa ngokuthi CQUniversity) kusekelwe Australia wemboni ombaxambili university eQueensland. campus Its oyinhloko North Rockhampton, Queensland. Nokho, liphinde has amakhampasi Rockhampton City, Bundaberg, Emerald, Gladstone City, Gladstone Marina, Mackay Ooralea, Mackay City and Noosa, kanye kwezidingo sites Cairns, Cannonvale, eliseTownsville, amalungelo Towers, Yeppoon, Biloela, Geraldton, Karratha futhi Perth. On 31 October 2014, CQUniversity wamemezela ukuthi uvule campus egcwele ku eliseTownsville enkabeni yedolobha 2015. It has amakhampasi wedolobha e Melbourne, Sydney, Adelaide nasezifundeni Brisbane. Njengoba of 2012 the esewonke wedolobha elikhulu phethwe kokubili abafundi international futhi ezifuywayo.
CQUniversity ihlose ukunikela ukwehluka nakalula, lapho izidingo eliyingqayizivele ngamunye inganqotshwa bese kudlulwe. Njengoba enyuvesi yase-Australia abazibophezele futhi esibandakanya, CQUniversity has a lokuba umphakeli ehamba phambili imfundo ibanga, Tinhlelo temfundvo zokufunda nezimo kanye nokufinyelela. It is kakhulu futhi ithathwa for ukuzinikela kwayo lekucamba social, ucwaningo umshado, amasevisi ukweseka umfundi, engagement international, ImiPhumela Jikelele graduate futhi isu elididiyelayo emfundweni ephakeme.
ngu 2020, CQUniversity kuyoba eyunivesithi olukhudlwana. Inyuvesi kuzokhulisa futhi ukusungula ukulethwa izinhlelo zayo yokufunda ibanga kanye on-campus lokunqamula i-Australia futhi kuhlinzekelwe abafundi ngemfundo Seamless ukuhambisana izindlela. CQUniversity uyoba eyunivesithi iyingqayizivele ngempela ukuthi uye wathola amandla ayo ngamandla endaweni. Le amandla ndawo uzokwazisa imisebenzi yayo futhi sikwazi abe umholi ezindaweni zocwaningo, zokufunda nokufundisa, engagement, isipiliyoni umfundi nobunyoninco social.
CQUniversity uyophinde liyaqhubeka eyunivesithi obandakanya wonke umuntu kanye neyunivesithi okuhlonipha ukwehlukana kanye nezenzo enikeza emuva.
Kungakapheli minyaka emihlanu ezayo, CQUniversity ngizoya kusuka Strong ukuze Great ngokusebenzisa engagement by:
Growing ukusebenzisana idumela lethu ngokusebenzisa imikhakha yemiphakathi ehlukahlukene ukwakha ubudlelwano obujulile futhi ongasoze wabuna okuzokwenziwa buqina njengoba thina yaba nendima bakhuthele ekukhuthazeni zemfundo, social, kahle amasiko nezomnotho. Siyobazisa ubuhlobo bethu nabo bonke ababandakanyekayo bese udweba phezu lolu lwazi collective kanye nesipiliyoni ukuze ukuphonsa esivivaneni amaphuzu anohlonze embonini kanye nomphakathi. Futhi sizobe izimali emikhakheni abasebenzi bethu ukuhlinzeka imiphumela yekufundza kanye nakho ukuze kuzuze abafundi bethu kanye nababambiqhaza, futhi igqugquzele futhi avikele khulula nophenyo nabanengqondo futhi nkulumo yonke imisebenzi.
Growing Wezemfundo Ephakeme Nokuqeqesha kwezeMfundo ngokusebenzisa edonsa nokubuyisa abafundi neminikelo eliphezulu nezimo, izindlela ezingenamphetho. Le mizila uyosiza abafundi abazoba nomsinga ezifuywayo international, kumephu out a plan isifundo eyenza ukuba ukuhlangabezana izifiso zawo ezemfundo nemikhakha yemisebenzi. Okubalulekile, abafundi bethu ngeke benziwe abakufundayo ngokusebenzisa imisebenzi ngokubambisana kanye nokufunda iyiqiniso nokufundisa design.
Ukunikeza umfundi emnandi kakhulu ngokusebenzisa usiko ukuthi kukhuthaza omuhle umfundi isipiliyoni eyenza abafundi bethu ukuba babe nalokho bafuna kube nangokonga ozibophezele ngokuphelele ezimisweni emisha social, iinthombe, lungeneke banzi iqhaza. uhambo abafundi Ezethu 'uzobe ubuhle ngokusebenzisa indawo eyeseka okhuthaza impumelelo, kungakhathaliseki isizinda sabo. abafundi lwethu luyoqina abaphothule career-ekulungele ngokuhlala kokunikezwa ithuba iqhaza emsebenzini kuhlanganiswe nokufunda kanye aphumayo ukuhamba izinhlelo. Ngalesi bayohlala ukuthuthukisa ilwazi, amakhono, ukuqonda nokuphila nesipiliyoni ukuze bahlanganyele ngokugcwele emphakathini kanye nomnotho.
Ofanele ucwaningo enkulu ukuthi yakhiwe izidingo kanye nezifiso nezimboni kanye nasemiphakathini yethu, kokubili lapha e-Australia naphesheya kwezilwandle. Ukuze senze lokhu liyohlangana lesifunda, imiphakathi ucwaningo yezwe neyamazwe ngamazwe kanye nabalingane ukwandisa umsebenzi futhi anezinhlelo ezivelele zabasebenzi nabafundi. Ngalesi siyohlakulela abacwaningi okusezingeni eliphezulu abasebenza kubhekwe ekuphuculeni imiphakathi ngokugqugquzela ulwazi kanye nemibono emisha.
Inwebisa ukuba khona kwethu futhi sifinyelele ukuhlangabezana nezidingo zalabo esifunda nabo kanye nemiphakathi. Sizokwenza lokhu ngokukhulula amathuba ukuze abantu bafinyelele kalula esifundweni ezi tertiary, kungakhathaliseki ukuthi ngokusebenzisa ngcono yokufunda online ubuchwepheshe noma ngokusebenzisa ukusungulwa kwezikhungo ezintsha, izikhungo isifundo noma uma esewonke.
School of Business kanye noMthetho
School wezeMfundo kanye Ubuciko
School of Engineering Nobuchwepheshe
School of Human, Impilo kanye Isayensi Yabantu
School of Medical osetshenziswayo futhi Sciences
Amakhono Business Nezabantu
Amakhono Ubunjiniyela Trades
CQUniversity saqala Queensland Institute of Technology (Capricornia) e 1967, kwathi ngemva kweminyaka emibili ngaphansi igama University College of Central Queensland, e 1992 phathelana i inyuvesi olusemthethweni uqambe University of Central Queensland. Ngo 1994, ke bamukela igama Central Queensland University. Ngo 2008, kwaba CQUniversity ngekuvuma izikhungo’ ukunwetshwa ngaphesheya Central Queensland esifundeni.
isikhungo CQUniversity sika egameni elandulela, eQueensland Institute of Technology (Capricornia), yasungulwa ngo Rockhampton e 1967 njengoba kungaba njalo egatsheni wesifunda Queensland Institute of Technology (Brisbane).
Nokho, izinyathelo zokuqala ukusungula eyunivesithi Rockhampton zithathwe njengoba ekuseni njengoba 1940. Ngo 1941, eQueensland Labor Premier, William Forgan Smith, kwesigaba owethulwa 17 ka-National Education Ukuxhumanisa futhi University of Queensland Amendment Act, ehlinzekela ukudalwa amakolishi inyuvesi ngaphandle Brisbane. Ngo 1944 futhi 1945, uchungechunge Rockhampton amathimba Wagqugquzela uhulumeni Queensland okwesikhathi ekolishi enyuvesi, kodwa ngemva University of Queensland esungulwe inethiwekhi izikhungo cwaningo wesifundazwe 1940 ngasekupheleni udaba ukunqamuka.
Ngo 2001, eyunivesithi esimisiwe Queensland kuqala zesifazane Usekela-Shansela, UProfesa Glenice Hancock, othathe umhlalaphansi 2004.
Kusuka 2002 ukuze 2007, eyunivesithi iwine eminingi Queensland Export imiklomelo (isigaba imfundo) futhi amabili National Export Awards imfundo (2002 futhi 2005); futhi e-Good Amayunivesithi Guide wathandwa kakhulu 5 Ukulinganisa kwanoma iyiphi inyuvesi yesifunda e-Australia ngo- 2003 futhi ezinhlanu 5 Ukulinganisa e 2006 futhi 2007.
ngu 2006, inyuvesi ezisebenza ezine zalo Australian International esewonke ngesikhathi Brisbane, Gold Coast, Sydney futhi Melbourne kanye campus e Suva, Fiji, ngenkathi ezinye ukubambisana ezimbili ezinkulu sogu lolwandle niqhubeka Shanghai futhi Singapore, nokuwohloka imisebenzi e-Hong Kong. Le nyuvesi kabusha imisebenzi yayo ngamazwe esikhathini 2006 ukuze 2009 futhi rebranded nomfanekiso waso esisencwadini 2008, ekushintsheni brand ayo kusukela Central Queensland University CQUniversity.
Kowezi-2000, CQUniversity sekuphinde zilalela izidingo emiphakathini yase-Australia futhi izifunda awusebenzelayo futhi kugcizelelwe nezinhlelo yemvelo kanye nezimbiwa, engineering, ubuhlengikazi, imfundo, accounting, intuthuko eqhubekayo futhi imfundo ngemasiko. Enye yalezi Luhlelo lwekufundza zempumelelo bekulokhu UProfesa Kerry Reid-Searl, eyathola 2012 Australian Uhulumeni Office kwe nokuFundisa Award wakhe sekulingisa eziqanjiwe kakhulu yokufundisa amasu, usebenzisa zasesiteji womuntu-like ukulungiselela abafundi kwezobuhlengikazi kokuzijayeza. Le nqubo yaziwa ngokuthi imaski-Ed ™ (KRS sekulingisa) Kusukela ngaleso sikhathi waba atholakale othisha yonkana anhlobonhlobo eyala jikelele.
CQUniversity futhi bemdumisa umzamo yayo ezintsha ekuvuleni izifundo zomthetho ukuze iinqhema zesifunda nabahluphekile ngokusebenzisa Bachelor wokuqala Australia online kweMithetho, ngalo banika e 2011, nge ukubhaliswa-ngonyaka wokuqala emhlabeni 100 abafundi. Owabe IJaji eNkantolo eNkulu I uMhlonishwa Michael Kirby AC CMG ishilo ukuthi ukufinyeleleka ngezinga sika nakalula ngabe sandise iqhaza ekufundeni ezomthetho, ikakhulukazi kubafundi abavela ezindaweni lesifunda nokusuka Bomdabu, bezinhlanga nabahluphekile, "Obekungase bakuthola kunzima, noma kungenzeki nhlobo, ukubhalisa enkambweni umthetho "futhi ayikwazanga" ukugcina abasebenzi abanamakhono futhi abaqeqeshiwe lesifunda nasemaphandleni-Australia. "
Okokuqala okubili namashumi eminyaka 21st Century nabo baye basibona aqhubeke ethuthuka esinamandla CQUniversity ngokugxila kuvuselelwe ekucwaningeni osetshenziswayo, imfundo lesifunda kanye nebanga, nemfundo sokufundela nge ekubumbaneni yayo nge Central Queensland Isikhungo TAFE ngoJulayi 1, 2014.
CQUniversity iyikhaya eziphambili emhlabeni ucwaningo nezikhungo: the Appleton Institute for yokuziphatha Isayensi, NokuFundisa Ezemfundo Research Center, Institute for Health and Social Science Research and Institute for Resource Industries kanye Sustainability. Eziningana izikhungo zayo ucwaningo (Isikhungo se-Rail Engineering, Amandla kanye Energy Centre, Centre for Environmental Management kanye Center for Plant Namanzi Sciences babe Ukugcizelelwa asekelayo ukukhula nokuchuma e CQUniversity sika ekhaya esifundeni Central Queensland.
Ucwaningo impumelelo zihlanganisa izinkomo yimpumelelo cloning uProfesa Gábor Vajta; futhi UProfesa David Midmore futhi Honorary Zakhamizi nocwaningo isikhulu Andrew Rank sika ekufezeni kugazethi ku 9 October 2010 (ngemva kokuphenywa kwecala cishe iminyaka eyishumi yocwaningo kanye nezicelo) we Sweetener yemvelo, stevia rebaudiana, njengoba isithako yemvelo-kilojoule amaningi ukudla futhi wenze iziphuzo. UProfesa Midmore stevia kushiwo ingaba "abalulekile ithuluzi / isithako ukusetshenziswa umphakathi ekulweni ukukhuluphala kanye ehambisana syndrome umzimba kanye nesifo sikashukela (thayipha II)."Ucwaningo avelele futhi zihlanganisa amalahle umphetho izitshalo ukwelashwa amanzi igesi Ben Kele sika. Ben uye kabanzi lubonisa ithuthukiswe uhla ion ukushintshisana wentaba-mlilo idwala isihlungi abezindaba imisindvo ukuthi kuncishiswe i-sodium nosawoti, akhethiwe esindayo izinsimbi, hydrocarbon elihlobene ne-petroleum negesi izimboni. Ben futhi unesibopho uhla izitshalo ukwelashwa emfantwini. Omunye izinhlelo iye yasetshenziswa ngesikhathi Woodford Folk Festival indawo. ucwaningo uDkt Scott Wilson ku 'Mutant' Toads futhi lifinyelele yenanelwa okuningi nge angabiki iphrojekthi kusiteshi 10 zisebenzisa uhlelo Nhlobo Wild. UDkt Wilson uye zilandelwa kwezinso e Toads njengenhlangano inkomba nezinguquko ezenzeka endaweni ezungezile. CQUniversity futhi uye baphumelele nge yayo iphrojekthi Green Inkukhu okuyinto focusses ku yokudla yenkukhu biochar (iminonjana elincane angqongqa izinkuni imfucuza) e ukuxubana yabo ukudla bese ngithatha umquba eliqukethe biochar futhi Composting ngayo izithasiselo amaminerali ukukhiqiza i Umanyolo eziphilayo. Le phrojekthi iye ukunconywa ngokubekezelelana carbon yayo izakhiwo smart.
Amanye ahlanganisa ukubamba iqhaza nyuvesi ocwaningweni umsebenzi ngokomzimba, kubandakanya ukusungulwa 10,000 Izinyathelo kanye 2014 National Health and Medical Research Council (NHMRC) ngezimali ucwaningo lokuthi umsebenzi umzimba kungakusiza nokucindezeleka. CQUniversity futhi iyikhaya i Ukugembula kokulinganisa Ucwaningo Laboratory. I Queensland Centre for Domestic & Family Violence Research kusekelwe emagcekeni Mackay eba nomthelela ekutheni lo lokuvimbela nodlame lwasemndenini kanye nomndeni ekwazisa, ukuphromotha nokusekela izenzo ngabanye, imiphakathi, amasevisi kanye nohulumeni ngo buholi statewide ocwaningweni, intuthuko professional, imfundo emphakathini ukubandakanyeka. I-Centre for Mental Health Nursing Ukuqamba at CQUniversity inikeza ubuholi engqondo ubuhlengikazi impilo at yendawo, isimo, kazwelonke kanye namazinga omhlaba kanye isibe isizinda sokucwaninga ngezibalo futhi kusengaphambili wesazi e engqondo ubuhlengikazi impilo ngokubambisana nalabo abathintekayo kusukela umkhakha nemphakathini.
umkhankaso inyuvesi Rockhampton sika waqala ngawo-1950 njengoba Central Queensland waba abasafufusa esindayo umkhakha isizinda, wekutfutfukisa ezimayini zamalahle kanye Gladstone abasafufusa njengoba isikhungo ukukhanya izinsimbi. Esikhathini Queensland ephalamende ngoNovemba 1956, ilungu zendawo ukuze Rockhampton (H R Gardner) kushiwo "izindawo ezanele kwezemfun- lobuchwepheshe" Kwase kuzodingeka ukuba esifundeni kanye, ihehe ifilosofi ngokuthi "ekuhambeni fair", wanxusa ukuthi Rockhampton abantu anikwe "amathuba afanayo njengoba labo Brisbane". Ngo 1958, P J Goldston, unjiniyela (kamuva, UKhomishana Railways,) mooted kungenzeka eyunivesithi Central Queensland nge Rockhampton onjiniyela nangemva okwengeziwe ingxoxo emphakathini, iMeya Rockhampton, Alderman R B J Pilbeam, ngokuthi umhlangano weningi wokuqala ku 3 Mashi 1959 lapho Central Queensland University Development Association (Uda) ukuthi ngokomthetho.
I Uda ethulwa iziphakamiso nyuvesi kahulumeni kanye, e 1961, uhulumeni Queensland agodliwe 161 hectares (400 esingamahektare) komhlaba kahulumeni Parkhurst (North Rockhampton) phezu Bruce Highway ngasemngceleni Yeppoon Cisha njengoba ephakeme imfundo indawo. Ukusungulwa ekugcineni yaxazululwa ngoMashi 1965, lapho Martin Umbiko Commonwealth kukahulumeni (ku ukunwetshwa zemfundo ephakeme) wethulwa ePhalamende UNdunankulu Menzies-owamemezela isisekelo isitayela esisha tertiary institution zombili Rockhampton futhi Toowoomba. I nezikhungo-Rockhampton omusha wawubizwa ngokuthi The Queensland Institute of Technology, Capricornia (QITC)-were inxusa main Queensland Institute of Technology campus Brisbane futhi ayengenalo ukuzimela amanyuvesi, kokuba kulawulwa Queensland uMnyango wezeMfundo.
Lapho QITC kuqala wavula ngo-February 1967, kwakungekho campus enqala ukubingelela Idlanzana labasebenzi kanye eyanele yokuqala 71 esigcwele nabafundi itoho. Nakuba isakhiwo wathuthuka at Parkhurst, kwaqhutshwa amakilasi okuqala aphethwe phansi phezulu Technical College Bolsover Street babe indaba esikhashana kungekho laboratories, izindawo umtapo noma isitokwe. ngu 1969, abasebenzi kakhulu nabafundi wayemdlulisile kuya campus Parkhurst, namanje isayithi Bushland kuyaqhubeka-ngezinyanga zasehlobo, campus lwaluvame ringed ngu umbukwane ehlathini imililo noma limbozwa imvula ekhukhulayo: izimoto Ngafaka odakeni noma babe yizinkulumo kanye QITC sika isisekelo Uthishanhloko, UDkt Allan Skertchly, abantu ukuwela e 4WD bakhe bawelela ngaphesheya amanzi ezikhukhula. Abanye abafundi waselala okwesikhashana omatilasi enkantini usalindele ekolishi lokuqala zokuhlala ukuze evulekile.
Naphezu kwalezi zimo ezinhle nesiqalo esincane, focus on izifundo sokufundela professional kwakusho ngowokuqala abathweswe iziqu ngaqashwa-ne ngomumo amafemu accounting, CSR, Mt Isaya Mines nawesifunda ugesi amabhodi nanye wezibalo umfundi, Peter Nothling, ngisho wajoyina-European Space Agency.
Uyafuna xoxa Central Queensland University ? Noma yimuphi umbuzo, imibono noma ukubuyekezwa
Central Queensland University kumephu
Izithombe: Central Queensland University Facebook ezisemthethweni
Izibuyekezo Central Queensland University
Joyina ukuxoxa Central Queensland University.